Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. विश्वकप छनोट : नेपालद्वारा हङकङ ५ विकेटले पराजित – Emountain TV
विश्वकप छनोट : नेपालद्वारा हङकङ ५ विकेटले पराजित
काठमाडौं, २९ फागुन । आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप छनोट अन्तर्गत नेपालले हङकङलाई ५ विकेटले पराजित गरेको छ । हङकङले दिएको १ सय ५४ रनको लक्ष्य नेपालले ५ विकेटको क्षतिमा ४० दशमलव ४ ओभरमा पूरा गर्‍यो।
खराब सुरुवात गरेको नेपालको जितमा रोहित कुमार पौडेल र सोमपाल कामीले छैटौं विकेटका लागि अविजित ८९ रनको साझेदारी गरे । रोहितले ४८ तथा सोमपालले ३७ रन जोडे । पहिलो विकेटका लागि ४१ रनको साझेदारी गरेको नेपालले ६६ रन बनाउँदा ५ विकेट गुमाएको थियो ।
ओपनर अनिल कुमार साह २६ रनमा आउटभएकामा अर्का ओपनर ज्ञानेन्द्र मल्ल ३१ बल खेलेर १२ रन मा पेभिलियन फर्किएका थिए । यस्तै कप्तान पारस खड्का ११, आरिफ शेख २, र दीपेन्द्रसिंह ऐरी १२ रनमा आउट भएपछि नेपाली इनिङ धर्मराएको थियो । तर रोहित र सोमपालले सम्हालिएर खेल्दै नेपाललाई जिताए ।
बुलावायो मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको हङकङ ४८.२ ओभरमा १ सय ५३ रनमा अलआउट भएको थियो । हङकङलाई सामान्य योगफलमा रोक्ने क्रममा सन्दीप लामिछानेले ३ विकेट तथा बसन्त रेग्मी र करण केसीले २-२ विकेट लिए । सोमपाल कामी र ललित राजवंशीले आफ्नो नाममा १÷१ विकेट लेखाए । लगातार ३ खेलमा पराजित भएको नेपालले सोमबार हङकङलाई ५ विकेटले गरेसँगै एकदिवसीय मान्यता पाउने आशा बढेको छ । नेपाल समूह बीमा चौंथो भएको छ ।
नेपालले जितेसँगै समान अंक भएपनि रनरेटका आधारमा अफगानिस्तान तेस्रो भएर सुपर सिक्समा पुगेको छ । नेपालले एकदिवसीय मान्यता पाउन विहिबार हुने खेलमा पपुवा न्युगिनीलाई पराजित गर्नुपर्ने छ । नेपाल, पपुवा न्युगिनी र हङकङमध्ये एक मुलुकले एकदिवसीय मान्यता पाउनेमा हङकङले नेदरल्याण्डलाई जितेको अवस्थामा नेपाल र हङकङबीचको विजेताले बाजी मार्ने छ ।